खाली मोल्डिंगमा खाली प्लास्टिकको बोतलहरू बफर गर्दै
धातु पत्ता लगाउने
ड्रप टेस्ट उपकरण
वजन जाँच गर्दै
प्याकेजि Sol समाधानहरू
ग्लुइ - - फोमिंग
प्याकेजि Tools उपकरण
तुलना लागत बैग कार्डबोर्ड
राउन्ड बोतलहरूको लागि ढाँचा प्याकेजि calc गणना
वर्ग बोतलहरूको लागि ढाँचा प्याकेजि calc गणना
चुहावट परीक्षण क्यालकुलेटर
उच्च भोल्टेज क्यालकुलेटर
अपरेटरको वर्कलोड समय अध्ययन
कुल प्लाज्मा लागत गणना
कार्डबोर्ड प्यालेट क्यालकुलेटर
डेल्टा ईन्जिनियरिंग स्वचालन
सामग्री प्रतिरोध तालिका
चुहावट परीक्षण / तौल
श्रेणी "बफरिंग" बाट संग्रह
बुधवार, १ April अप्रिल २०० 08 by क्रिस्टिना मारिया सुनिया
ब्याग स्ट्याकिंग मेशीन
यो झोला स्ट्याकिंग मेसिन एकदम कम्प्याक्ट एकाई हो, जुन निर्दिष्ट ब्यागरको पछाडि फिट हुन्छ। यसले ब्यागबाट ब्यागहरू स्वीकार गर्दछ र तिनीहरूलाई माथि सार्दछ। योसँग धेरै स्ट्याकिंग स्थितिहरू छन्। श्रम र ठाउँ मा बचत गर्दछ।
मा प्रकाशित ब्याग बफरि।
अन्तर्गत ट्याग गरिएको: झोला, झोला स्ट्याकिंग, ठाउँ बचत
बुधवार, २१ मार्च २०० 19 by डेल्टा ईन्जिनियरि।
बफर कन्वेयरले लाइन लाई माइक्रो स्टपमा प्रतिरक्षा बनाउँछ। यो लेबलिंग मुद्दाहरूको समाधान गर्दछ जस्तै बोतल संकोचन, ट्रेपनिंग, लगातार स्टपजेस। तपाईंको प्याकेजि line लाइनको दक्षता बढाउँछ। तपाईं कूलि and र बफरि betweenको बीचमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
मा प्रकाशित बफर कन्वेयरहरू
अन्तर्गत ट्याग गरिएको: संकुचन, लाइन स्टपपेज, लाइन दक्षता, बफरि, कूलिंग, लेबलिंग
बफर तालिका - पूर्ण स्वचालित
बफर तालिकाले माइक्रो स्टपमा लाइन प्रतिरक्षा बनाउँदछ: ट्रिमिंग मेशिनमा स्टापपेज, लेबलरहरू ... तपाईंको प्याकेजि line लाइनको दक्षता बढाउँदछ। झटका मोल्डिंग र भरिने लाइनहरूका बीच प्रयोग गरियो।
मा प्रकाशित बफर तालिकाहरू
अन्तर्गत ट्याग गरिएको: लाइन स्टपपेज, लाइन दक्षता, बफरि, लेबलिंग
बिहीबार, March१ मार्च २०० 29 by क्रिस्टिना मारिया सुनिया
कूलि & र बफर तालिका - दुई पक्षीय कार्यका लागि
कूलि and र बफर तालिका शीतलन र बफर समस्याहरू झटका मोल्डिंगमा समाधान गर्दछ। ट्रिमिंग मेशिन / लेबलरमा लाइन स्टपपेजेजलाई हटाउँदछ र बुलबुले बेवास्ता गर्दछ। बफर कन्वेयर: १२०० मिमी चौडा, 1200००० मिमी लामो। तपाईंको प्याकेजि line लाइनको दक्षता बढाउँछ।
मा प्रकाशित चिसो तालिकाहरू
अन्तर्गत ट्याग गरिएको: लाइन स्टपपेज, लाइन दक्षता, बफरि, कूलिंग, लेबलमा बुलबुले
कूलि and र बफर तालिका - दुई पक्षीय अपरेशनको लागि
कूलि and र बफर तालिका शीतलन र बफर समस्याहरू झटका मोल्डिंगमा समाधान गर्दछ। ट्रिमिंग मेशिन / लेबलरमा लाइन स्टपपेजेजलाई हटाउँदछ र बुलबुले बेवास्ता गर्दछ। बफर कन्वेयर: १२०० मिमी चौडा, 1400००० मिमी लामो। तपाईंको प्याकेजि line लाइनको दक्षता बढाउँछ।
►धातु पत्ता लगाउने
►ड्रप टेस्ट उपकरण
►वजन जाँच गर्दै
►प्याकेजि Sol समाधानहरू
►ग्लुइ - - फोमिंग
►प्याकेजि Tools उपकरण
►प्याकेजि auto्ग स्वचालन
►प्याकेजि optim अनुकूलन
►प्याकेजि ways मार्गहरू
►झटका मोल्डिंगमा हीट ट्रान्सफर
►स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग
►तौल जाँच गर्नुहोस्
►इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल
►डेल्टा ईन्जिनियरिंग स्वचालन
सामाजिक प्राप्त गर्नुहोस्
© डेल्टा-ईन्जिनियरि।। सबै अधिकार सुरक्षित।
तपाईंको दक्षता सुधार गर्नुहोस्
यो वेबसाइटले तपाइँलाई हाम्रो वेबसाइटमा सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ।
यो एक पासवर्ड रहित प्रणाली हो।
कृपया तपाईंको कम्पनीको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
लिंक तपाईंलाई तुरून्त पठाइनेछ।
अज्ञात प्रयोगकर्ताहरू पहिलो अनुमोदनको अधीनमा हुनेछन्।
आफ्नो विवरण भूल गए?
AAH, रुको, म अब सम्झना!
तपाईंको खाता सक्रिय गरिएको छ, तपाईं अब आफ्नो खातामा लग-इन गर्न सक्नुहुनेछ।
कृपया हाम्रो मध्यस्थहरूलाई तपाईंको खाता सक्रिय गर्न केहि समय दिनुहोस्।
तपाईको रजिष्ट्रेसन लिंक पहिले नै तपाईको इ-मेलमा पठाइएको छ। कृपया तपाईंको इनबक्स र स्पाम फोल्डर जाँच गर्नुहोस्। नयाँ पंजीकरण लि generated्क उत्पादन र मेल मार्फत पठाइनेछ लगइन पछि मात्र 24 घण्टा
तपाईको स्वचालित लगईन लिंक पहिले नै तपाईको इ-मेलमा पठाइएको छ। कृपया तपाईंको इनबक्स र स्पाम फोल्डर जाँच गर्नुहोस्। नयाँ स्वचालित लगईन लिंक उत्पन्न हुनेछ र मेल मार्फत पठाइनेछ लगइनमा पछि मात्र 120 मिनेट
हामीले तपाईंको इ-मेलमा पठाएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईंको ईमेल ठेगाना पुष्टि गर्नुहोस्।
लग ईन गर्न कृपया तपाईको इ-मेल प्रयोग गर्नुहोस्।
लग-इन लिंकको साथ एउटा मेल तपाईंलाई पठाइएको छ।
सुरक्षा कारणका लागि ईमेल पठाइनेछ । वेबसाइटमा पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्नका लागि कृपया यस ईमेल भित्रको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
दर्ता लि .्कको साथ एक मेल तपाईंलाई पठाइएको छ। कृपया तपाईंको इनबक्स र स्पाम फोल्डर जाँच गर्नुहोस्। लिंक को लागी मान्य छ 24 घण्टा।
लग ईन / रेजिष्टर
लगइन लिंक केवल मूल कम्प्युटरबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हाम्रो सर्वर व्यस्त छन्, कृपया पछि पुन: प्रयास गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हाम्रो सर्वरहरूले त्रुटि फिर्ता गरे, कृपया पछि पुन: प्रयास गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हाम्रो सर्वरहरूले अपूर्ण प्रोफाइल फिर्ता गरे, कृपया पछि पुन: प्रयास गर्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंको लग-इन लिंक समाप्त भयो। कृपया अर्को ई-मेल लि gene्क उत्पन्न गर्न तपाईंको ईमेल प्रयोग गर्नुहोस्।